Sida loo sameeyo Wakhtiga Guud ee Apple
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan macaamiisha Apple ayaa awood u leh inay u tagaan Apple Store ee kuugu dhow taageerada iyo tababarka hal-ka-socda ee Genius Bar.
Genius Bar waa meesha ay isticmaalaan dadka isticmaala iPod , iPhones , iTunes , ama waxyaabo kale oo Apple ah oo ka heli kara tiknoolaji tiknoolaji oo teknoolaji ah. (Genius Bar oo kaliya waa taageerada tiknoolajiyada kaliya haddii aad rabto inaad barato sida loo isticmaalo badeecada, Apple waxay leedahay fursado kale oo ka mid ah dukaamada.) Laakiin maaddaama Apple Stores ay mar walba mashquul tahay, waxaad u baahan tahay inaad ballan horey u sii sameysato haddii aad rabto caawimo raadso. (Sida habka, waxaa jira app ah in .)
Dhibaatooyin badan ayaa lagu xallin karaa dadka isticmaala iyaga oo leh tilmaamaha qaar. Laakiin haddii aad u baahato caawimaad qof ahaaneed, habka aad ku heli kartid caawimaad ayaa noqon kara jahawareer iyo niyadjab. Maqaalkani wuxuu sahlaa.
Arts Debat / Moments Mobile Ed / Getty Images
Raac tallaabooyinkan si aad waqti u dhigatid Genius Bar taageero.
Ku billow adigoo booqanaya shabakadda taageerada Apple ee ah http://www.apple.com/support/.
Ku dhaji hoos u dhiga qaybta taageerada Apple Apple .
Guji badhanka Taageerida Get .
Marka xigta, riix badeecada aad rabto inaad ka hesho caawimaad dhinaca Genius Bar.
Sharaxaad ka bixi dhibaatadaada
Talaabada 2aad: Sameynta Ballan-qaadka Barashada.
Marka aad dooratid alaabta aad u baahan tahay caawimaad:
Mawduucyo badan oo caawimo ah ayaa la soo bandhigi doonaa. Tusaale ahaan, for iPhone, waxaad arki doontaa ikhtiyaarka si aad u hesho caawimaad leh arrimaha batroolka , dhibaatooyinka leh iTunes , dhibaatooyinka leh barnaamijyada, iwm. Xulo qaybta si dhow u la mid ah gargaarka aad u baahan tahay.
Tiro mowduucyo ah oo ku jira qaybtaas ayaa soo bixi doona. Xulo midka ugu habboon baahidaada (haddii uusan jirin, guji Mawduuc ma lihin).
Iyada oo ku xidhan qaybta iyo mushkiladda aad dooratay, tiro soo jeedin ah ayaa la soo jeedin karaa . Waxaa laguu sheegi doonaa siyaabaha suurtagalka ah ee lagu xallinayo dhibaatadaada adiga oo aan tegin Genius Bar. Isku day inaad si xor ah u tijaabiso haddii aad jeceshahay; waxay ku shaqeyn karaan oo ku badbaadin karaan safar.
Haddii aad doorbideyso inaad toos u tagto si aad ballan u sameysid, had iyo jeer dooro No haddii la weydiiyo haddii soo-jeedinta ay caawisay. Xaaladaha qaarkood, waa inaad doorataa Maya mahadsanid. Guji sii wad marka goobtu kuugu soo dirto email ama talooyin taakuleyn qoraal ah.
Xulo Ballan Barta
Ka dib markii ay gujisay dhamaan talooyinka taageerada la soo jeediyay ee Apple ka yimid:
Waxaa lagu weydiin doonaa sida aad u jeceshahay inaad hesho caawimo. Waxaa jira dhowr doorasho, laakiin kuwa aad rabto waa kuwa soo booqda Genius Bar ama soo qaado Adeeg / Dayactir (fursado kala duwan ayaa lagu soo bandhigayaa nooca dhibaatada aad dooratay bilowga).
Haddii aadan arkin fursadahaas, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad dib u ceshato dhowr tallaabo oo aad doorato mawduuc kale oo taageero ah oo ku dhammaato fursadahaas.
Markaad samayso, waxaa lagaa codsan doonaa inaad la soo saxiixato Aqoonsigaaga Apple . Sameey.
Xulo Dukaamada Apple, Taariikhda, iyo Waqtiga loogu talagalay Ballon Bar
Haddii aad dooratid Booqo Genius Bar , gal lambarkaaga koodhka (ama u fasax daaqadaadu inay galaan Goobtaada hadda) iyo inaad hesho liis ah naadiyada Apple Stores.
Haddii aad dooratid Bring in adeeg iyo aad u baahan tahay caawimaad la iPhone, sameeya isla markaana ku dar shirkaddaada taleefankaaga iPhone si aad u hesho liis ay ku qoran yihiin dukaamada Apple iyo agagaaraha.
Khariidadu waxay muujinaysaa liiska aad ka iibsaneysid Apple Stores .
Riix bakhaar kasta si aad u aragto khariidada, sida ay uga fog tahay adiga, iyo inaad aragto maalmaha iyo waqtiyada loo heli karo ballamaha Genius Bar.
Markaad hesho dukaanka aad rabto, dooro maalinta aad rabto oo guji waqti ku habboon ballantaada.
Xaqiijinta Ballan iyo ikhtiyaari joojinta
Ballantaada Genius Bar ayaa loo sameeyey dukaanka, taariikhda, iyo waqtiga aad dooratay.
Waxaad arki doontaa xaqiijinta ballantaada. Faahfaahinta ballanta waxay ku qoran yihiin halkaa. Xaqiijinta ayaa sidoo kale loo soo diri doonaa.
Haddii aad u baahan tahay inaad baddasho ama baajiso bakhshiinka, riix Meesha Iskudayga Raadinta ee emailka xaqiijinta waxaadna sameyn kartaa isbedelada aad u baahan tahay goobta Apple.
Ma ubaahantahay iPad?
Sidee loo qori karaa iPad
Sida Loo Isticmaalo Xawaaraha Internetka ee iPadka
Talooyin ku saabsan Taleefanka Talo-siinta iPad-ka ah
Samee Rikoodhada Dukaanka Apple Apple Isticmaalka Apple Store App
Sida loo koro calaamadaha Wi-Fi ee Gurigaaga
Sidee loo kiciyaa Windows Vista
Blogyada Bulshada: Dhaqdhaqaaqa Bulshada ee Casriga ah
Kulanka Video ee Shabakadaha Computer
Sida loo Xaqiijiyo Explorerframe.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Sidee loo daabacaa qayb ka mid ah Dukumentiga Word
Sidee loo kufin karaa qof ka mid ah Facebook
Ku samee filimo cajiib leh Wicitaankaaga
Canon Pixma MP480 Dib-u-eegis Qoraal Sawir ah
Waa maxay magaca martida?
NAD T748 7.1 Aqoonsiga Tiyaatarka Kanaalka - Dib u eegis
Horudhac Nabadgalyada Nabadgalyada Nidaamka
21 ee Barnaamijyada Wanaagsan ee Ku Fiican Safarka Xagaaga
Waa maxay Shabakada Warbaahinta Shabakada?
PC-gaaga waa Dhibaato Wacan
Dayactirada Emailka ee Instant IDE ee Mac OS X Mail
Sida Loogu Nadiifiyo Laptop-kaaga
Sidee Layers loo Isticmaaley Barnaamijyada Naqshadeynta iyo Muuqaalka Farshaxanka?
EMP Tek Impression Serif 5.1 Buugga Tilmaamaha Guriga Tiyaatarka Tiyaatarka